Gudoomiyaha Aqalka sare oo ku baaqay in la joojiyo Dagaal beeleedka ka taagan Sool. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAGudoomiyaha Aqalka sare oo ku baaqay in la joojiyo Dagaal beeleedka ka taagan Sool.
Gudoomiyaha Aqalka sare oo ku baaqay in la joojiyo Dagaal beeleedka ka taagan Sool.
October 24, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Gudoomiyaha Aqalka sare oo ku baaqay in la joojiyo Dagaal beeleedka ka taagan Sool.
Cabdi Xaashi C/llaahi Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ayaa baaq nabadeed u diray Beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka Dhumay, ,wuxuuna tacsi u diray eheladii ay dadkoodi ku geeriyoodeen dagaaladaasi.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in nasiib daro ay tahay in xilligan la daadiyo dhiig shacab badalkii nabada laga shaqeyn lahaa.
Dhinacyada dagaalanka u dhexeeya ayuu ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiyaan dagaalka, islamarkaana xabad joojin deg deg ah ay ku dhawaaqaan.
Waxaa weli isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka dhumey ee Gobalka Sool.
Maamulka Hirshabelle oo ka hadlay howlgalada ka socda Hiiraan.
Sawirro:-Banaanbax Looga Soo Horjeedo Dagaalka Gobolka Sool
650,991 total views, 5,307 views today
650,991 total views, 5,307 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
650,865 total views, 5,310 views today
650,865 total views, 5,310 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
650,894 total views, 5,306 views today
650,894 total views, 5,306 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
650,955 total views, 5,309 views today
650,955 total views, 5,309 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
651,016 total views, 5,310 views today
651,016 total views, 5,310 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]